အကြံပြုသည့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းအလုပ်များ - သင်အလုပ်တစ်ခုရှာနေလျှင် [Genvers]
ထောက်ခံအကြံပြုထားသောလုပ်ငန်းခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း / အချိန်ပိုင်းအလုပ်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း
[စာမျက်နှာ ၄၂ စာရင်း] အကြံပြုသည့်နေရာတွင်လူသစ်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ခေါ်ယူခြင်း။ဆောက်လုပ်ရေး၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကထားသောအလုပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရပြီးသင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကိုတိုးပွားစေပါ။Hagiwara Co. , Ltd. , Asunaro Hosou Co. , Ltd. မှအကြံပေးသည့်လုပ်ငန်းခွင်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုတင်ခဲ့သည်။
[Koshigaya City] ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရန်အတွက်ဂုဏ်ပြုသည့်ငွေ "ယန်း ၅၀၀၀၀" ရှိသည်။
[Shinjuku Ward] မိုးရေယိုစိမ့်မှုတည်ဆောက်ခြင်းခေါင်မိုး / ရေစိုခံ / ပန်းချီ
39 ကိစ္စကျွန်တော်အကြံပြုထားတဲ့အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ရှိတယ် (၁-၃၀)
First Ken-O Expressway Co. , Ltd. ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဟုတ်လား
Nomura Komuten Co. , Ltd.
လူငယ်များ - လက်မှုပညာရှင်များ!ကွဲပြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အတွေ့အကြုံမရှိသူများသို့မဟုတ်အလုပ်ပြောင်းနေသောသူများ << Motivation / Enthusiasm >> ၎င်းတို့ကိုအလေးအနက်ထားစောင့်ရှောက်သူများ!
နှစ်ပေါင်းများစွာအကြွေးနှင့်အောင်မြင်မှုများဖြင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်သည်ကောင်းမွန်ပြီးသူသည်နေ့တိုင်းအလုပ်များနေသည်။အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိခြင်း (^^ personality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအထူးအလေးထားသောလူများကိုငှားရမ်းခြင်းဖြင့်aနွေးထွေးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကောင်းသောဆက်ဆံရေးနှင့်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါ။ သင်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ပင် monthly လစဉ်လစာယန်း ၃၀၀,၀၀၀ ယန်းကိုစတင်ပါ။ contact ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ (ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းများအတွင်း)! သင်သည်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုဝင်ငွေရရှိနိုင်သည်။
လစဉ်လစာယန်း ၂၇၆,၀၀၀ မှ ၄၆၀,၀၀၀ * စမ်းသပ်ကာလ ၂ လရနိုင်သည် * နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ [လစဉ်ဝင်ငွေဥပမာ yen ယန်း ၃၀၀၀၀၀ (အတွေ့အကြုံမရှိသော ၀ န်ထမ်း)] * နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း x ၂၃ ရက် (အခြားအပတ်တိုင်း) ...
1390-6 Kamiyoshizawa, Hiratsuka
Nomura Komuten Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Soyu ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း Co. , Ltd. မှအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ဟုတ်လား
●ကျနော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်မှု၊ ရေပိုက်၊ စွန်အစရှိသောအခြားအလုပ်ဝန်ထမ်းများကိုရှာဖွေနေပါတယ်။အပြည့်အဝလူမှုဖူလုံရေးအာမခံတပ်ဆင်ထားသည်!အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ချင်သောသူတို့အဘို့တည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကတိပေး!သင်ကအတွေ့အကြုံနည်းရင်တောင်နေ့စဉ်လစာ ၁၆၀၀၀ ယန်းနဲ့သင့်ကိုကုသပေးလိမ့်မယ်။
[ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရေပိုက်ခြင်း၊ စွန်နက်မှူးလုပ်ခြင်း] လူမှုဖူလုံရေးအာမခံနှင့်အပြည့်အဝပါ။အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ချင်သောသူတို့အဘို့တည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကတိပေး!ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်လူမှုအာမခံနှင့်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပြီးသင်၌အတွေ့အကြုံနည်းပါးသော်လည်းပင်နေ့စဉ်လစာသည်ယန်း ၁၆၀၀၀ မှစတင်သည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်အမြဲတမ်းအလုပ်များနေပြီးတည်ငြိမ်မှုကိုလိုချင်သူများနှင့်ဝင်ငွေမြင့်မားသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးသည်။
စည်သွပ်စက်လုပ်ခြင်း၊ ပိုက်ခြင်း၊ စွန်နက်နှင့်အခြားအမျိုးမျိုးသောအလုပ်ဝန်ထမ်းများ (စက်ရုံ / စက်ရုံအလုပ်) လုပ်နိုင်သည်။
# နေ့စဉ်လစာ [အတွေ့အကြုံမရှိ] ၁၆၀၀၀ ယန်း ~ [အတွေ့အကြုံရှိသူ] နောက်ထပ် ဦး စားပေးကုသမှု * တနင်္ဂနွေနေ့၊ အားလပ်ရက်အလုပ်စရိတ် * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ * သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ...
Ota Kogyo Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေမှာ "ထောက်ခံချက်ဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်။